Dr Khin Maung Win - Shwe Yi Win: နှစ်တစ်၇ာပြည်. တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း
မိတ်ဆွေတွေ ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်မောင်ရစ်ကအဖိုးအဖွားရဲ့ ခေတ် ပြိုင်မိတ်ဆွေ တွေရဲ့ ဓါတ် ပုံတွေဲပြမယ်၊နောက်ပြီးသူနဲ့သူ့အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေအွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်နေတဲ.မိုးမခဂျာနယ်မေလထုတ်ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်။စာရေးဆရာမိသါးစုရဲ.တတိယမျိုးဆက်ဆန္ဒနဲ.အကောင်အထည်ဖော်တါဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်အလုပ်များတဲ့ကြားမှာအစာရေးသူကလာတဲ့ဧည်တွေကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မစိမ်းအောင်၊သိအောင် ရင်ပတ်မှာနာမယ်ကဒ်ပြားလေးတွေက ပ ပေးဖို့်စိတ်ကူးပေါ်လာပါတယ်။ဒီ စိတ်ကူးကိုသားမောင်ရစ်ကသဘောတူပါတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စာရေးဆရာတွေနဲ.တွေရင်စိတ်ထဲမှာ “ သူကဘယ်သူလဲ “ ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တခါတလေလည်းနှုတ်ကအသံထွက်ပြီး မေးဖြစ်ခဲ့သိခဲ့၊တခါတလေမေးရမှာအားနာလို့မမေးခဲ့လို့ မသိခဲ့ရတာများပါတယ်။ဒီတော့မေမေတိုဘဘတို့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေမိတ်ဆွေသစ်တွေအတွက်ရင်ဘတ်မှာကပ်ဖို့ ကဒ်ပြားလေးတွေလုပ် ပေးပါတယ်။အခုလို ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ ခေတ်မှီနေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ တူမလေးခင်သစ္စာကအဲဒီကွက်လပ်ကို ဖြည့် ဖို့ ကဒ်ပြားလေးတွေလုပ်ပေးပါတယ် ။ အဒီကဒ်ပြား ပေါ်မှာ နာမည်ရေးတာ ၊ ရင်ပတ်မှာ ကပ်ဖို့ ကတော့သားနဲ့ ချွေးမမေသန်းဌေး တို့ မိတ်ဆွေ မယု နဲ့ အိမ်ရှေ့ အိ မ် က ခင်ပြေ ညိမ်း တို့ ကို တာ ၀န်ပေးရ ပါတယ် ။ တ ကယ်က သူတို့ နှစ် ယောက် ကိုဧည့်
မှတ်တမ်းရေးဖို့ နဲ့ စာအုပ်လက် ဆောင်ပေးဖို့ တာဝန်ပေးထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ရာထား
တဲ့တူမလေး ဒေါက် တာနိနိ စိုး မင်း ကနေမကေါင်းတော့မယုနဲ့ ခင်ပြေညိမ်း က တာဝန် အား လုံးကို ယူရ ပါတော့ တယ်။
သားမောင်ရစ်နဲ့ မိုးမခ နာယက ကြီး ဦး မိုးသူ ၊ ကလေးတွေကသိပ်သဘောကျပြီး မ မြင်ဖူးသေးတဲ့ ဦးဇော်ဇော် အောင် တို့ လည်းလာ ကြ ပါတယ်။မေမေတို့ ရဲ့ အချစ်တော် ဒိုင်းခင်ခင်ဒေါ်လှသန်းရဲ့ သားကျော်ကျော်မင်း၊အပြင် မေမေတို့ မိတ်ဆွေ လင်းယုန် မောင် မောင် ရဲ့ သားသား ကြီးမောင်ဇေယျ၊ မေမေဆုံးခါနီးအထိမေမေ့ ဆီ အ မြဲရောက်လာပြီး စကါး ပြောတဲ့ ဗိုလ် ထိန်လင်း( ဗိုလ်တစ်ထောင်) ရဲ့ သားကိုမော်လင်း ၊ မေမေ နဲ့ ဘဘ ကို ခိုလှုံ့ ရာပေးခဲ့တဲ့ သံတတားလမ်းက ဖွားဖွား ဒေါ် သေးသေးရဲ့ သား ဥိးစံတင် နဲ့ မမ၀င်း ၊ (ဘဘနဲ့အတူ ဂျပန်ခေတ်က နုိုငံခြားရေးရုံး မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်သန်းခင်ခေါ် မမခင် က မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။မမခင်ဟာမေမေတိုဘဘတို့ အကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ် မှတ်မိပြီးပြော ပြ သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မမခင်လိုဘဲ မေမေနဲ့ ဘဘ တို့ အကြောင်းကို ပြောပြ တတ်တဲ့ မမတင်ကတော့ မလာနုိုင် ခဲ့ပါဘူး။သူလည်းအသက် ၈၀ ကျော် ၉၀ နိးပါ ပြီ ။ ဒါပေမယ့် မမတင် ကျန်းမာရေး အလွန်ကေါင်းသူပါ။ ) သံတတားလမ်း ရဲ့အ မျိုး ဖြစ်တဲ့ ဦးအေးမောင်(စာပေဗိမာန်) နဲ့ မမရင်(ဒေါ်သေးသေးဧ။် သမီး ကြီး) တို့ ရဲ့ သား ကို လှတိုး(ရန်အောင်စာပေ)နဲ့ မြေး ပြည့် ကျော် တို့ လည်းလာ ကြပါ တယ်။ ရန်အောင်စာပေက သမီးဂျူနိယာဝင်း ရဲ့ A Memory of My Grandparents စာအုပ် ထွက် အောင်လုပ်ပေးသူတွေ ဖြစ် ပါတယ်။)
မေမေတို့ ဘဘတို့ ကိုလေးစားတဲ့ ဒေ၀ီသန့် စင်(တော်ဘု၇ားလေးဦးအောင် ဇေရဲ.သမီး) ၊ဆရာဦတင်မိုးရဲ့သမီးမိုး မိုးစံ နဲ့ ဦးသန်းညွန့် ၊ မေမေ နဲ့ ဘဘကို မိဘပမာ ရုိုသေပြီး ၊သူတို့အကြောင်းကိုအမြဲပြောနေတတ်တဲ့ဒေါ်ရွှေ ဂူ မေ နှင်း(မမနှင်း ကခြံကိုတစ်ရက်ကြိုပြီး ရေဖျန်းပေးပါတယ်။)မမေနှင်းလိုပဲမေမေတိုဘဘတို.ကိုရိုသေတဲ.မမစမ်းစမ်းနွဲ.သါယါဝတီတို.မိသါးစု။မေမေရှိစဉ်ကအညါမုန်.စားချင်တယ်ဆိုလို.ခြံထဲကိုမုန်.ပြားသလက်ဈေးသယ်ကိုခေါ်လါ
ပြီးမုန်ပြားသလက်လုပ်ပြီးကျွေးတဲ.စာရေးဆရာကြီးမောင်သော်ကရဲ.တူတွေဖြစ်ပြီးကျားဘငြိမ်းရဲ.သားတွေဖြစ်တဲ.ဦးဝင်းငြီမ်းတို.ညီအစ်ကို၊ မေမေတို့ ဘဘတို့ ကပြခဲ့တဲ့ စရေးဆရာ ပြဇာတ်မှာသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ. စာရေးသူရဲ့ ဥိးလေးတော်စပ်တဲ.လင်းယုန်နီရဲ့သား နဲ့ သမီး မောင်ထင်အောင် နဲ့ ဒေါက်တာ၇ီ၇ီ မြင့် ၊ တို့ စုံစုံလင် တွေ့ ရပါ တယ် ။ မေမေ တို့ ဘဘ တို့ မရှိ တော့ တဲ့ နောက် ပိုင်း ဆက်လက် ပြီးအ တူတူ အ လုပ်လုပ် ရင်း ခင်မင် ခဲ့ တဲ့ဦးကျော်ဦး (ပါရမီ စာပေ) ၊ unity စါပေက ဦးသန်းဆွေ ၊ ဦးဝင်းချို (ဓူဝံ)၊ ဦးဝင်းတင် (English For All ) ၊ ဦးညွန့် ဝေမိုး ( စိတ်ကူးချိုချို )၊ ဦးသိန်းလွင်(လင်းလွန်းခင်)၊ တို့ လည်းလာ ကြပါတယ်။
မိသားစုလေးယောက်ဟာ စာပဲရေးပြီး လူပရိသတ်ကို စကါးမပြောဖူးတာက ရွှေ ရီဝင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောဖြစ်သွားပါတယ်။ မိသားစုလေးယောက် စကါးပြောပြီးတော့ ဦးတင်ဦး နဲ့ ဘကြီးမိုး (ဦးမိုးသူ) တို့ က စကါးပြောကြပါတယ်။ ဦးတင်ဦးပြောတဲ့ မေမေ့အကြောင်း တွေက စာရေးသူတို့ မိသားစုက မေမေဆုံးပြီးမှ ကြားဖူးတဲ့ စကါးတွေဖြစ်ပါတယ်။ မေမေ စစ်ယူနီဖောင်း ၀တ်တယ်ဆိုတာ မေမေ မရှိတော့ မှ ကြားဖူးတာပါ။ ဦးတင်ဦးကိုယ်တိုင် မြင်ခဲ့တွေ့ ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေမေရှိစဉ်က အချို့ တွေက မေမေ ယူနီဖောင်း ၀တ် တဲ ကိစ္စ ကိုဲု ၀တ်စရာမရှိ လို့ စသည်ဖြင့် ပြော ကြပါတယ်။မေမေကိုယ်တုိုင်ြ့ပန်ပြောတာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင်က “ခင်ဗျားလုပ်နေရတာစစ်ရုံးမှာစစ်တပ်ကကိစ္စ တွေကြီး ဘဲ ဆိုတော့ ယူနီဖေါင်း ၀တ်လိုက်ပါ။” လို့ ပြောလို့ ၀တ် တာ လို့ ပြောသလို သူများတွေပြောသလို ၀တ်စရာ မရှိလို့ ၀တ်တာလို့ လည်း ပြောပါတယ်။အချို့ တွေဆီမှုာ မေမေယူနီဖောင်း ၀တ်တဲ့
ပုံရှိတယ်လို့ ပြောသံ ကြားပေမယ့် ၊ စါရေးသူတိုမိသားစုက မမြင် ဖူးပါ ဘူး ။ မေမေ စစ်ယူနီဖောင်း ၀တ်ခဲ့တာကို သင်္ချာဆရာကြီးကလည်း မမှတ်မိကြောင်းကို ၀န်ခံပြော ဆိုပါတယ်။ သင်္ချာဆရာကြီးက မေမေ နဲ့ ဘဘ ရဲ့ နှစ် တစ်ရာပြည့် မွေးနေ့ မှာတော့ အခု လိုပြောပါတယ်။
Posted by Junior Win at 8:27 PM
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း( သင်္ချာ ) - ပျော်တော်ဆက်၏ြ...